Seranam-piaramanidina amerikana: Aiza izy ireo izao ary inona no miandry azy ireo?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Seranam-piaramanidina amerikana: Aiza izy ireo izao ary inona no miandry azy ireo?
Ny filohan'ny Vondron'habakabaka Meehan, Deborah Meehan, dia niresaka tamin'ny vondrona mpitarika malaza mba hiresaka momba ny dikan'ny COVID-19 amin'ny seranam-piaramanidina.
Ny CEO an'ny Allegheny County Airport Authority dia mizara ny resadresaka nifanaovany tamin'ny filoham-pirenena amerikana Joe Biden.
Ahoana no nahatonga ny foiben'ny American Airlines mahery setra, DFW International, tamin'ny taon-dasa ho foibe faharoa lehibe sy faharoa ahazoana tombony indrindra any Etazonia?
Rehefa nikatona i Las Vegas dia nikatona ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena McCarran, noho izany ny fanarenana dia tsy maintsy natomboka tamin'ny tany aotra.
Tao amin'ny tontolon'ny mpitarika avy amin'ny American Airport dia i Christina Cassotis, Lehiben'ny Executive Executive ao amin'ny Allegheny County Airport Authority; Sean Donohue, CEO an'ny DFW International Airport; ary Rosemary Vassiliadis. Talen'ny sidina fiaramanidina ho an'ny Clark County any Nevada.
Mandritra izay CAPA - Ivotoerana fiaramanidina hetsika, nanokatra ny fifanakalozan-kevitra i Deborah Meehan ary nilaza hoe: Tsy handany fotoana be izahay raha tsy te-hiresaka ny olona ny taona lasa. Heveriko fa efa niainantsika daholo izany, ny sasany amintsika manao atin'akanjo anatiny, ary efa nanana ny ankamaroan'io azontsika raisina. Ka ny tiako horesahina betsaka dia ny hoe, aiza ianao izao ary inona ny eritreritrao. Ary hanana fanontaniana fanokafana ho an'ny panelista tsirairay aho.
Ka ho an'i Christina Cassotis, araka ny efa nolazaiko taminy taloha, nandritra ny androm-piainany, ny fiainana rehetra dia fotoana ary i Christina masters fotoana. Nanao fanambarana vao haingana izy fa manangana ilay terminal vaovao. Ary azony natao ny niresaka momba izany Filoha Biden, iza no tsy maintsy lazaiko fa saro-piaro amin'izany resaka izany aho, Christina. Ary nanontany tena aho raha hisokatra amin'ny hoe manao ahoana izany fanapahan-kevitra izany ianao. Miresaha amin'ny filoha Biden, na inona na inona tianao holazaina momba izany.